China PVC nopetahany takelaka harato hexagonal harato sy mpamatsy | XINTELI
Hexagonal Wire harato
Galvanized Hexagonal Wire harato
PVC Hexagonal Wire harato
Wire Mesh Fefy
PVC mifono hexagonal tariby harato
Galvanized welded tariby harato
PVC Coating welded tariby harato ...
Fefy voahazona namboarina fefy an-tsaha
Karazana vokatra: Pvc mifono harato hexagonal harato
Fitaovana: tariby vy mifono plastika avo lenta, tariby vy ambany karbaona
Fitsaboana ambonin'ny tany: mifono PVC
Pvc coating hexagonal wire mesh dia fantatra amin'ny anarana hoe chinken netting. Pvc mifono hexagonal wire netting dia vita amin'ny tariby vy karbaona ambany. Miaraka amin'ny fihodinana mahitsy, famolavolana fihodinana. mampitombo ny androm-piainan'ny tamba-jotra, ny anti-ultraviolet, ny anti-aging ary ny toetr'andro. Ny safidy amin'ny loko isan-karazany dia afaka manatsara ny tontolo manodidina. Raha ny mahazatra, ny loko malaza dia maitso.
Ny harato hexagonal plastika toy ny karazana efijery, be mpampiasa amin'ny indostrian'ny petrochemical, ny fananganana, ny fiompiana anaty rano sy ny sisa. Toy ny fananganana rindrina raikitra, fanamafisana ny takelaka vita amin'ny gorodona, fitehirizana ny hafanana, insulation heat; fantsom-pamokarana herinaratra , antifreeze, fiarovana amin'ny fialofana, fiarovana ny ala. Azo ampiasaina koa amin'ny fiompiana akoho, gana, bitro ary biby hafa rehetra.
Karazan'orinasa: Orinasa orinasa sy varotra
Vokatra lehibe: Wire Mesh, Fefy vy
Taona nananganana: 2008
Fanamarinana: TUV, ISO9000
Toerana: Hebei, Sina (Tanibe)
Haben'ny habe: 1 '', 1/2 '', 5/8 '', 3/4 '', 2 ''
Fametahana tariby: 0.9mm ~ 2.0mm
Length: 5m, 10m, 25m, 30m, sns.
Ambainy: 0.5m ~ 1.5m
Endri-javatra: mahazaka harafesina, mahazaka harafesina, mahazaka oksidasiôna, mivory mora foana.
Fanamarihana: ny habeny ankoatr'ireo voalaza etsy ambony ireo dia azo natao mba hanafarana aorian'ny fanamafisana.
tranom-borona, fefy zaridaina, kianja filalaovana ankizy, haingo Krismasy.
Mampiasa fiainana mety, lava serivisy, hery fiarovana avo lenta, mitahiry vidin'ny fitaterana, manovaova tsara.
Seranana FOB: Tianjin
Fotoana itarihana: 15 ~ 30 andro
Fonosana: a. Ao anaty horonana, fonosina taratasy fanamarinana rano na aforitra aforitra
b. Amin'ny paleta
c. Ny fomba fanangonana hafa dia mety ekena aorian'ny fanamafisana
Payment & lahateny
Fomba fandoavam-bola: T / T, Advance TT, Paypal Etc.
Mifantoka amin'ity sehatra ity izahay mandritra ny taona maro ary manana traikefa maro amin'ny harato harato sy fefy vy izahay rehetra. Ny vokatray dia vita amin'ny fitaovana avo lenta. Ny orinasa dia eo akaikin'ny orinasa misy anay. Omena ny santionany ary azo ekena ny baiko kely fitsarana aorian'ny fanamafisana. Ny vidinay dia mirary. Tianay ny hitazona kalitao ambony ho an'ny mpanjifa rehetra eran'izao tontolo izao.
Previous: Galvanized welded tariby harato
Manaraka: Galvanized hexagonal wire harato Fefy biby
Galvanized hexagonal wire harato Fefy biby
Inona ny harato hexagonal harato
Fahalalana momba ny harato tariby
Ny fampirantiana dia tena zava-dehibe amin'ny orinasanay
No.29, Làlana Taihua, Shijiazhuang, Sina